1. Ny salmona angamba no fampiasa mora ampiasaina indrindra. Fenitra salmon vaovao Misy vata fampangatsiahana miraikitra ao aminy hisakafo hariva. Na sakafo atoandro matsiro mora foana Ary azo ampiasaina amin'ny fandrahoana lovia isan-karazany koa Andao hojerentsika ny fomba fanaovana salmon mora, vehivavy mpikarakara tokantrano na chef vao manomboka. Afaka manao azy tsara
2. Ahoana no fomba fiomanana mora alohan'ny hanaovana
3. Voalohany indrindra, ny fitaovana dia tsy maintsy vonona. Mba hifehezana saleta salmon ara-dalàna Tokony ho vonona hividy spatula somary lehibe kokoa noho ny mahazatra ianao. Raiso araka izay hitanao lehibe ity. Ahoana ny fisafidianana azy, alao an-tsaina izany Tokony ho spatula afaka manainga sy mamadika ny ankamaroan'ny hena amin'ny lapoaly izy io. Ary ny fonon-trondro dia azo alaina na afindra amin'ny lovia voaomana tsara. Na raha tsara kokoa Mividy spatula hisamborana trondro feno trondro Namboarina manokana ho an'ity tanjona ity, safidy tena tsara izany.
4. Taty aoriana dia nitady "vilany vy" sahaza ny mpivaro-kena aho. Arotsaka ao anaty lafaoro izy io. Ny lapoaly tsy misy stick stick dia heverina ho mitombina ihany koa. Mitadiava iray izay afaka miditra ao anaty lafaoro mafana. Ary ny safidy tsara hafa dia ny lapoaly miaraka amina lovia nohamafisina. Hamarino tsara fa ny vy amin'ny lapoaly dia tsy voavolavola, miforitra. Rehefa tratry ny hafanana be ao anaty lafaoro Ary ny karazam-bolo (amin'ny sary) dia mety ihany koa amin'ny famonoana.
5. Iray hafa tena ilaina izany. Petara orona fanjaitra kely (Toa tweezers ilay izy) dia azo ampiasaina hamoaka ny taolana pin'ny trondro. Safidio ny habe mety, mateza, ny kalitao no tsy maintsy ho ny tsara indrindra. Satria mahery ny taolana pin'ny salmona Ary ny famoahana ireo taolana dia tsy maintsy milamina Mba hahazoana endrika tsara tarehy ihany koa
6. Ny zavatra farany dia ny manamboatra taratasy hodi-biby na foil aluminium. Ampiasaina amin'ny fonon'ny trondro izay hapetratsika ao anaty lafaoro (trondro en papillote) ary ho an'ny lapoaly fanendasana liner.
7. Fanalana ny salmon amin'ny pinbones.
8. Apetraho eo amin'ny solaitrabe ny fenitra salmon. Birao fanapahana lehibe Na azonao apetraka amin'ny foil eo amin'ny latabatra lakozia. Ny lamina dia Apetraho eo ambany ny hoditra. (Na dia tsy misy ny hoditra aza) dia ampiasao ny tananao hikasika ilay taolana kely mipoitra mba hahitana hoe aiza izy io. Ary avy eo dia manomboka amin'ny faran'ny matevina indrindra Ampiasao ny plastika-orona mba hahatratra tsara ny faran'ny taolana ary hisintona azy.
9. Ny fandrahoana salmon amin'ny fatana no fomba mora indrindra. Raha tsy manana na tsy te hampiasa lafaoro ianao Mikasika ny fizotran'ny fandrahoana sakafo dia misy ny SAUTEING sy POACHING.
10. SABOTSY Saoty voaroy, endasina haingana amin'ny famadihana ny trondro 1-2 heny fotsiny amin'ny hafanana be. Mora sy haingana mahandro ity fomba ity. Ny fomba hanaovana izany dia toy izao manaraka izao
11. Atsonika dibera 1 sotro ao anaty vilany ao anaty afo mafana. Andraso hilatsaka ny dibera ary hitodika ny totalin'ny volamena maizina, 3 minitra eo ho eo.
12. Mamafaza sira sy dipoavatra ao anaty lapoaly, andraso 6 minitra mandra-pahatonga ilay trondro ho mavokely. Avereno avy eo ny trondro Avela ao anaty lapoaly (Aza averina miverina ny trondro) Andraso mandra-masaka mba hanandrana, 2 ka hatramin'ny 4 minitra hafa.
13. Ny POaching dia salmon nandrahoina izay hanome anao loko masaka tsara sy tsara. Izy io koa dia fomba tsara iray ahazoana trondro masaka tsara tsy misy tavy. Ireto ny fomba fototra.
14. Ataovy ao anaty lapoaly ireo fonosana trondro. Avy eo, ampio rano amin'ny lapoely ampy handrakofana ireo fonon'ny trondro Manaraka, mamafa ny sira, dipoavatra ary ravina bay (cardamom).
15. Alefa moramora sy haingana, avy eo vonoy ny hafanana, sarony ny lapoaly ary avelao ny trondro hahandro. Maharitra 20-30 minitra eo ho eo. * Amin'ity tranga ity, ny salmon voafantina dia tokony ho antonony hatramin'ny lehibe.